စာအုပ်ကရုရှားကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးချန်ပီယံအတွက်ဘောလုံးဗိုလ်လုပွဲတက်ရောက်ရန်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခရီးသွားများအတွက်အထူးအဆုံးစွန်သောလေထုအာကာသယာဉ်လေယာဉ်ငှားရမ်းဝန်ဆောင်မှု. ဒီလေဆိပ်လေယာဉ်ခရီးစဉ်များပြီးသား oversubscribed ဖြစ်ကြောင်းသို့သော်သင်နေဆဲပွဲတက်ရောက်ရန်ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်ဘွတ်ကင်နိုင်ပါတယ်
အဆိုပါဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလားကမ္ဘာ့နံပါတ်တစ်အားကစားဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်. ငါစကားလုံးဖြစ်ရပ်ဟုပြော, ဒါပေမယ့်အဆိုးဆုံးကြင်နာတစ်ခုလြော့ပေါ့ခနျမှနျးခကျြဖြစ်ပါသည်. ကမ္ဘာ့ဖလားအန္တိမအချိုးအစားတစ်ခု extravaganza ဖြစ်ပါသည်,အဲဒီမှာသူကလူတိုင်းကိုသူတို့ရဲ့အသက်တာ၏အချိန်ရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်. သို့သော်, များစွာသောလူဖြစ်ရပ်ကိုယ်တိုင်ကအံ့သြဖွယ်ဖြစ်ပါသည်နေစဉ်ခရီးအခြားတစ်ခုခုစီစဉ်ပေးဖို့လုံးဝလည်းမရှိကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ကြဘူး.
သငျသညျထုပ်ပိုးရန်ရှိသည်ဟူသောအချက်ကိုအပြင်, လုပ်ဖို့အဘယ်သူမျှမရဲ့အကြိုက်ဆုံးအရာအရာဖြစ်ပါသည်, သင်သည်လည်းခရီးသွားအဘို့အဘယ်သို့ပြုရမည်၏ရွေးချယ်မှုလုပ်ရန်ရှိသည်. အကယ်., အခွင့်အလမ်းအားဖြင့်, မောင်းနှင်မှုထို့နောက်ကြောင်းအလိုလိုပြဿနာတစ်ခုသင်တို့အဘို့တစ်ခု option ကိုဖြစ်ပါသည်. ပိုပြီးပြဿနာများပါဝငျသော်လည်းပျံသန်းလျက်ရှိသောသူတို့ကိုများအတွက်. လေဆိပ်မှရတဲ့ပြီးနောက်ကားတစ်စီးထားရန်အဘယ်အရပ်ကဲ့သို့အမှုအရာတို့ကို, ဘယ်လောက်ကောင်းလေယာဉ်ပေါ်မှဝန်ဆောင်မှုဖြစ်မယ့်, ဘယ်လောက်ယို-ထုပ်ပိုးသည့်လေဆိပ်များမှာ,သငျတို့သရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးနောက်ကားတစ်စီးငှားရမ်း.
ဒါကြောင့်သူအပေါငျးတို့ပြဿနာများကိုဖယ်ရှားကြောင့်ကမ္ဘာ့ဖလားခိုင်ခိုင်လုံလုံရန်ဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလားပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်ပဋိညာဉ်စာတမ်းပျံသန်းမှု Service ကိုယူပြီးသွားလာဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. သင့်အနေဖြင့်ပုဂ္ဂလိကချွတ်ဖို့သင့်ကားယူနှင့်သင်ပြန်လာတိုင်အောင်စွန့်ခွာ. သငျသညျအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ခံရဖို့တစ်ခုတည်းသောနာယကဖြစ်သောကြောင့်အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုသည်ကြီး. ကားတစ်စီးငှားရမ်းများသောအားဖြင့်ဘီးဟာပြေးလမ်းအပြင်ဘက်မြေပြင်ကိုထိအခြိနျအားဖြင့်သင်တို့အဘို့အတက်သတ်မှတ်.
ဤ, ပိုပြီးအကွောငျးရငျးမြားစှာအကြား, သင်တစ်ဦးပျံသန်းဖို့ရှေးခယျြသငျ့သညျအဘယျကွောငျ့များမှာ ပုဂ္ဂလိကစင်းလုံးငှားဂျက်လေယာဉ် ယင်းမှ ဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလား. အဆိုပါခေါင်းကိုက်ကြောင့်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်တန်ဖိုးရှိမဟုတ်. ကမ္ဘာ့ဖလားမှ Going အရှိဆုံးလူတို့အဘို့တစ်သက်တာအတွေ့အကြုံကိုအတွက်တစ်ချိန်ကဖြစ်ပါသည်, လာမယ့်တစ်သက်တာအဘို့ကိုအောကျမေ့ပါလိမ့်မည်. မှတ်ဉာဏ်တစ်ဦးမော်တော်ယာဉ်ငှားရမ်းခြင်းမှလာသောလုပ်ရတဲ့သို့မဟုတ်တစ်ကြောက်မက်ဘွယ်သောလေယာဉ်ခရီးစဉ်များဖြစ်မသွားပါစေပါနဲ့. စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်လုပ်ရတဲ့အခမဲ့ကြောင်းပုဂ္ဂလိကလေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုယူ.
မော်စကို Vnukovo မော်စကိုတွင်လူကြိုက်အများဆုံးပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်လေဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်, မြို့လယ်၏တည်ရှိသော 30km တောင်ဘက်-အနောက်. ၎င်း၏လေယာဉ်ပြေးလမ်းမဆိုအရွယ်အစားပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်လေယာဉ်တင်ကိုကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်နှင့်ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်ဖောက်သည်များနှင့်လေယာဉ်အမှုထမ်း 24 နာရီ FBO အဆောက်အရှိပါတယ်.
မော်စကိုရှိအခြားလေဆိပ် options များဖြစ်ကြသည် မော်စကို Domodedovo, မော်စကို Sheremetyevo နှင့် မော်စကို Ramenskoye.
ပဋိညာဉ်စာတမ်းရုရှားပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ် 2018 ဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလားမြို့ကြီးများမြေပုံ venues
စုစုပေါင်း 12 ရုရှားကကိုဖြတ်ပြီးကွင်းဟာအဘို့လ်တာအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပပါလိမ့်မယ် 2018 ဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလား. ဤအနေကြပါတယ်မော်စကိုနှင့်စိန့်ပီတာစဘတ်အတွက်အားကစားကွင်းအပြင်:
Ekaterinburg Kaliningrad အားကစားကွင်း,
မော်စကို Rostov Arena,
Rostov-on-Don ကာဇန် Arena,
ကာဇန် Fisht အိုလံပစ်အားကစားကွင်း,
Sochi Nizhny Novgorod အားကစားကွင်း,
စိန့်ပီတာစဘတ် Luzhniki အားကစားကွင်း, မော်စကို